Soomaaliya Oo Markii U Horaysay Laga Hirgeliyay Nidaamka Xisbiyadda Badan | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Soomaaliya Oo Markii U Horaysay Laga Hirgeliyay Nidaamka Xisbiyadda Badan
Muqdisho (SDWO): Gudiga doorashooyinka madax banaan ee Soomaaliya ayaa markii u horaysay shahaadooyinka aqoonsiga xisbinimo guddoonsiiyay 8 xisbi siyaasadeed, kuwaasoo loo aqoonsaday in ay buuxiyeen shuruudihii xisbinimo.
Shahaadadan aqoonsiga xisbinimo ayay gudiga doorashooyinka amdaxa banaan ku sheegeen mid ku meel ah, iyadoo ay weli dhiman yihiin shuruudo dheerad ah oo looga baahan yahay in 8 xisbi ay soo buuxiyaan.
Xaflad loo sameeyay gudoonsiinta shahaadooyinka aqoonsiga xisbinimo oo maanta lagu qabtay magaaladda Muqdisho waxaa goob joog ka ahaa guddoomiyaha golaha shacabka, raysal wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, xubno ak socday ururadda bulshadda rayid ah iyo marti sharaf kale.
Xisbiyadan shahaadooyinka aqoonsiga la gudoonsiiyay ayaa qayb ka ah nidaamka xisbiyadda badan oo la doonayo in Soomaaliya laga hirgeliyo iyadoo sida qorshuhu yahay waxaa la filayaa in ay ka qayb qaataan doorasho hal qof iyo hal cod ah mustaqbalka dhaw.
Siday sheegtay guddoomiyaha gudiga doorashooyinka madax banaan ee Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (xaliimo yareey), oo hadal ka jeedisay munaasibadii maanta.
Raysal wasaare ku-xigeenka xukuumadda federalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, ayaa sheegay in abuuritaanka nidaamka xisbiyadda badan ay bilaw u noqonayso sidii loo gaadhi lahaa doorashooyinka la filayo in ay dalka Soomaaliya ka dhacaan sanadka 2021-ka.
Sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawhari, oo hadal ka jeediyay munaasibadda ayaa sheegay in nidaamka xisbiyadda ay wakhtigan Soomaaliya si eyn ugu baahan tahay, isla markaana looga gudbi doono arrimo badan oo dhibaato ku haya siyaasadda Soomaaliya.
Geesta kale xildhibaan Fooziya Yuusuf Xaaji Aadan, oo u hadashay xisbiyadda siyaasadda ayaa tilmaantay marxaladihii kala duwanaa ee ay u soo mareen sidii loo heli lahaa in dalku yeesho nidaamka xisbiyadda badan.
Dhinaca kale xisbiyadan maanta la gudoonsiiyay shahaadadda aqoonsiga xisbinimo ayaa shuruudaha kale ee weli ka dhiman xisbi-nimadoodda waxa ka mid ah in xisbi kastaaba uu goboladda dalkoo dhan xafiisyo ku yeesho iyo iyo dad taageereyaal ah.